Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay maxaabiis laga soo daayay dalka Hindiya – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray January 19, 2018 January 19, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay maxaabiis laga soo daayay dalka Hindiya
MUQDISHO — Waxaa caawa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, Muqdisho, laga soo dejiyay 41 maxaabiis ah oo laga soo daayay xabsiyo ku yaalla dalka Hindiya, halkaas oo ay ku xirnaayeen sanado badan.
Soomaalidan caawa la keenay magaalada Muqdisho ayaa u badnaa kuwo soo dhameystay xukunno kala duwan oo horey Maxkamad ku taalla dalkaasi ugu ridday, waxa ayna ku eedeysnaayeen falal la xariira burcad-badeednimo.
Maxaabiista la soo daayey waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, Guddoomiye ku-xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, iyo mas’uuliyiin kale.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in maxaabiistan ay qayb ka yihiin maxaabiis horey looga soo daayay xabsiyada dalka Hindiya, waxa na uu intaas ku daray in 70 kale ay weli ku xiran yihiin dalka Hindiya.
“Waxa aan caawa Muqdisho ku soo dhaweynay 41 maxaabiis Soomaaliyeed ah oo muddo ku xirnaa dalka Hindiya, 76 kale ayaa dhiman iyagu na bisha Febraayo ayey dalka imaan doonaan, sida aan ku heshiinnay dawladda Hindiya. Dawladdu sidoo kale waxa ay waddaa dadaal ku aaddan sidii loo deyn lahaa maxaabiista kale ee ku xiran wadamada kale.” Ayuu yiri RW Khayre.
Guddoomiye Ku-xigeenka Labaadaad ee Golaha Shacabka ayaa uga mahadceliyay Xukuumadda Soomaaliya dadaalka ay ku bixinayso sidii loo soo deyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xir-xiran xabsiyada shisheeye.
Maxaabiistan Soomaaliyeed ee ku xirnaa Hindiya ayaa diyaaradda caawa ka soo dejisay Muqdisho waxaa u kireysay dawladda Soomaaliya, waxaana diyaaradda la socday Xeer-ilaaliyaha Qaranka, Safiirka Soomaaliya u fadhida Hindiya, iyo xubno kale.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa horey ugu guuleysatay in ay soo sii dayso maxaabiis badan oo ku kala jiray xabsiyo ku yaala Itoobiya iyo Jasiiradda Seychelles, kuwaas oo dalkooda lagu soo celiyay kadib sanado badan oo ay dhulal shisheeye ku xirnaayeen.
Qormadii HoreHore Shirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey Shariciga Shaqaalaha Rayidka ah iyo Tubta Siyaasada Loo dhan-yahay
Qormada XigtaKu Xiga Ra’iisul Wasaare Xasan Kheyre oo goordhaw ka dhoofay Magaalada Muqdisho